Kooxaha isku haya Libiya oo xabbad joojin ku heshiiyey – Madal Furan
Hoy > Warka > Kooxaha isku haya Libiya oo xabbad joojin ku heshiiyey
Kooxaha isku haya Libiya oo xabbad joojin ku heshiiyey
Madal Furan – Qaramada midoobay ayaa sheegtay iney kooxaha milishiyaadka ee todobadyadi ugu dambeeyey ku dagaallamayey magaalada Tripoli ay heshiis xabbad joojin gaareen.
Mas’uuliyiin ka tirsan xukumadda Tripoli ayaa waxay sheegen dagaallada guadaha magalada ka socday dhowrki toddobaad ee ugu dambeeyey iney ku dhinteen ugu yaraan 47 qof in kabadan 1,800 qoysna ay ku barakaceen.
Toddobaadki hore waxaa la gaaray heshiis xabbad joojin oo kan la mid ah balse saacada yar kaddib waa la jabiyey.
Dowlad ay qaramada midoobay taageerto ayaa ka arrimisa caasimadda dalka balse, maleeshiyaad dawladda ka soo horjeeda ayuu dlka intiisa kale gacanta ugu jira.
Ghassan Salame oo ah ergeyga qaramada midoobay ka socday ee heshiiska xabbad joojinta waday ayaa wuxuu sheegay ‘heshiiska maanta la gaaray inuu soo afjarayo dagaalka magaalada ka socday, laguna badbadinayo dadka rayadka ah ee ay dagaalladaasi saameeyeen’.
Wuxuuna sida oo kale heshiiska gacan ka geysanayaa ayuu yiri sidii dib looga furi gigada diyaaradaha kali ah ee waddanka oo dhan adeeg ka bixiyo ee Tripoli oo gabi ahaanba xidhnaa tani iyo 31-ka bisha August.
Wadahadallada looga jiray in la gaaro heshiiska xabbad joojintana waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada dowladda Libiya, hoggamiyeyaasha milishiyaadka iyo xubno ka socday qaramada midoobay.
Heshiiskan ayaa wuxuu ka mid yahay iskudayada lagu doonayo in magaalada Tripoli dagalaaka ka taagan lagu joojiyo, iyada oo laba heshiis oo xabbad joojin oo horay loo gaadhay gabi ahaantoodba la jabiyey.
Heshiiska maanta qalinka lagu duugayna waxaa dhexdhexaadiye ka ahaa qaramada midoobay.
Dalka Libiya ayaa waxaa ka taagan dagaallo iyo qulqulatooyin dabadheeraaday tani iyo marki bishi October 2011-kii xilka laga tuuray hoggaamiyihi hore ee Libiya Muammar Qaddaafi
Xaalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo mareysa “Culimada Kala Dhiciya”